Amacebo oShishino kwi140 yaBalinganiswa okanye abaphantsi | Martech Zone
Amacandelo oShishino kwi140 yaBalinganiswa okanye abangaphantsi
NgoLwesithathu, Aprili 3, 2013 NgoLwesithathu, Aprili 3, 2013 Douglas Karr
I-Twitter iphinde yavula eyazo Iziko lo shishino kwaye yongeza ividiyo entsha, emnandi. Ndiyayithanda imiyalezo kunye noyilo lwegraphic- ipeyinta umfanekiso ocacileyo we-Twitter kunye nendlela amashishini anokusisebenzisa ngayo isixhobo ngexesha lokwenyani ukufumana, ukuphendula kunye nokukhuthaza ishishini labo.
Izinto ezisisiseko zibandakanya ukudibanisa nabantu abafanelekileyo, fumana okungakumbi malunga nokuba ngubani okwi-Twitter kunye nendlela yokufikelela kubo, uqonde iziphumo zakho kubahlalutyi, dibanisa iinzame zakho zokuthengisa kunye namaqhosha e-Twitter kunye neeTweets ezifakiwe, yilinganise iinzame zakho zokwandisa ifuthe lakho
kwaye ufumane iziphumo ngamaqhinga okwazisa aphumelelayo kunye namacebo.
Uluhlu lwe-Twitter lubonisa amaqhinga ambalwa kumashishini ukuba athathe isicwangciso sabo se-Twitter phezulu kwinqaku:
Ukhuphiswano kunye ne-sweepstakes -Abalandeli ekujoliswe kubo, babenze babe nomdla, babandakanyeke kukhuphiswano apho baphinde babhale kwakhona kwaye bandise ukufikelela kubaphulaphuli bakho.
Impendulo ngqo -Sebenzisa iiakhawunti ezikhuthaziweyo ezijolise kubaphulaphuli abathile kwaye zijolise ekujoliseni ngokukodwa ukukhula okulandelayo. Phendula kwaye uncede ukukhula kwakho okulandelayo.
Umhlambi ukuvula -Abalandeli basasaza umyalezo ngokuphinda ubhale isithembiso kwaye, emva kwenani elithile le-Retweets, bavuzwa ngesaphulelo.
Partnership -Joyina imikhosi kunye nabashukumisayo ukuze wandise umyalezo wakho kwaye unikeze umnxeba owahlukileyo kwizenzo.
Ukuqaliswa kwemveliso -Sebenzisa iiAkhawunti ezikhuthaziweyo ukutsala abalandeli abatsha kunye nokudityaniswa kweeTweets eziKhuthaziweyo kunye neeNdlela eziKhuthaziweyo ukubandakanya abalandeli abanomdla.
Twixclusive -Yazisa ngentengiso yosuku olunye kuphela kwi-Twitter. Yomele ngokusebenzisana nesizathu apho inxenye yengeniso iya kunikelwa.
Sebenzisa iminyhadala ukubandakanyeka Umxholo we-Twitter kunye neqela lenkqubo linokwenza amava awenziwe ngokwezifiso ukukhuthaza umcimbi wakho.
tags: ii-tweets ezinyusiweyoabasebenzisi abonyuselweyoTwitterIntengiso ye-twitterImicimbi ye-twitterUkuthengisa nge-TwitterIindlela zokuthengisa ze-twitterI-twitter ikhuthaze ii-tweetsAmaqhinga e-twitterAmaqhinga e-twitter
Ukucaphula kunye nokuCatshulwa ngokuKhangela kwi-SEO yeNgingqi
Yenza iphulo elilula le-Twitter nge-IFTTT